“လူဟာလူလိုသိဘို့ ရာအတွက်” | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » My Dear Diary » “လူဟာလူလိုသိဘို့ ရာအတွက်”
Posted by aye.kk on Jul 27, 2012 in My Dear Diary | 22 comments
လော က ကို အ လှ ဆင် နေ သည် ကား မေ တ္တာ တ ရား ပင် ။
လော က ကို ဗြ ဟ္မ စို ရ် မျက် စိ ဖြင့် ကြည့် မြင် တတ် စေ ရန် ။ မေ တ္တာ တ ရား များ များ ထား ရှိ တတ် နိုင် စေ ရန် ။ လူ ဟာ လူ လို သိ ဘို့ ရာ အ တွက် ဟု ပြော ဆို ပြီး…..။
အ မေ က……ကျ မ အား အ မြဲ ဆုံး မ ဘူး ပါ သည် ။
ငယ် ငယ် ထဲ က ကျ မ ၏ ပင် ကို ဗီ ဇ စိတ် ဓတ် မှာ …….။
ကိုယ့် အ မြင် ဖြင့် သ ဘော မ ကျ မှု တွေ့မြင် ရ ပါ က ၊ စိတ် အ လို အ တိုင်း မ ကျ နိုင် ခြင်း ၊ ဒေါ သ ကြီး တတ် ခြင်း ၊ စိတ် အ လွန် တို တတ် ခြင်း ပင် ။
အ ရာ ရာ ကို ကိုယ့် အ မြင် ဖြင့် ၊ စိတ် ထဲ မ တွေ့ဘ ၀င် မ ကျ ပါ က ၊ အ ရာ ၀ထ္ထု ပ စ္စည်း များ အ ပေါ် တွင် ၊ ကျ မ မှ ပျက် စီး အောင် ဖျက် ဆီး လုပ် ပစ် တတ် ပါ သည် ။ ကျ မ အ ကြောင်း သိ သော အ မေ က ၊ ငယ် ငယ် လေး ထဲ က ပင် ။ လ ပြည့် လ ကွယ် ဥ ပုသ် ရက် တိုင်း အ မေ သွား လျှင် ၊ ကျ မ က မ ပါ မ ဖြစ် ။ အ မေ နှင့် အ တူ အ မြဲ လိုက် ပါ ရ ပါ သည် ။
မည် သည့် ဘုန်း ကြီး ကျောင်း ကို မ ဆို သွား သည့် အ ခါ တိုင်း ၊ လက် ဆွဲ ခေါ် သွား တတ် ပါ သည် ။ တ ရား နာ ခိုင်း ၊ ဥ ပုသ် စောင့် ခိုင်း တတ် ပါ သည် ။ တ ရား ပွဲ ပြီး က လည်း ၊ ဘု ရား စောင်း တန်း ရှိ ၊ နံ ရံ ရေ ဆေး ပန်း ချီ ကား ချပ် များ ရှိ ၊ ရုပ် ပုံ များ ကား ချပ် များ ပါ ။ ဘု ရား ဟော နိ ပတ် တော် လာ များ အား ၊ သ ဘော နား ၀င် လောက် အောင် အ မြဲ ဆုံး မ ပြော ပြ တတ် ပါ သည် ။
အ မေ့ ရည် ရွယ် ချက် က ၊ ဒေါ သ ကြီး တတ် သော ကျ မ အား မေ တ္တာ တ ရား များ များ ထား တတ် ရန် ၊ သီ လ ယူ ခိုင်း ခါ ၊ တ ရား ထိုင် ခိုင်း တတ် ပြီး ၊ ကျ မ အား သည်း ခံ ခြင်း ခန္တီ အား ပြု လုပ် ခိုင်း တတ် ခြင်း ပင် ။ တ ရား ထိုင် ၍ ထုံ ကျင် လာ လျှင် ၊ ကျ မ ၏ ကိုယ် အ မူ အ ယာ မ ငြိမ် ဘဲ ရွေ့ သွား လျှင် ၊ အ မေ က လည် ချောင်း အ သံ ပေး ကာ ချောင်း ဟန့် တတ် ပါ သည် ။
အ မေ က တ ရား ထိုင် သည် ဆို လျှင် လည်း ၊ စိတ် က ကျ မ ထံ ရောက် နေ သည် ကို သိ ရ ၍ ၊ ထို အ ခါ မျိုး တွင် ကျ မ စိတ် ထဲ တွင် ၊ ကျ မ ကြောင့် အ မေ တ ရား ဖြောင့် အောင် မ ထိုင် နိုင် သည် ကို စိတ် မ ကောင်း ဖြစ် မိ ရ ပါ သည် ။
မ လိုက် လို က လည်း မ ရ ။ အ မေ သွား လျှင် ကျ မ အား ခေါ် သွား တတ် စ မြဲ ။ အ မေ က ၊ ကျ မ အား တ မိ ပေါက် တ ယောက် ထွန်း ဆို သ လို လွန် စွာ ဂေါင်း ကြော မာ သည့် သူ ဟု အ မြဲ ပြော နေ တတ် ပါ သည် ။ ကျ မ အ ကျင့် က ဖြောင့် ရ အ လွန် ခက် ပါ သည် ။ ဂေါင်း က လည်း အ လွန် မာ ပါ သည် ။
အ မေ က တော့ ခွေး နှင့် ပုံ ပ မာ နှိုင်း ကာ ၊ နာ လောက် အောင် မှတ် သား ပြော ဆို တတ် ပါ သည် ။
ခွေး မြီး ကောက် က ၊ ကျည် တောက် စွပ် ထား ပေး သည့် အ ချိန် တွင် ခ ဏ သာ ဖြောင့် သည် ။
ကျည် တောက် ချွတ် လိုက် လျှင် န ဂို မူ လ အ တိုင်း ပင် ။ ပြန် ကောက် သည် ။ မ ထူး ခြား နား ဟု ပြော ပါ သည် ။
လူ မှန် ပါ က လူ လို အ သိ ထား ရှိ ရ မည် ။
လူ ဖြစ် လျှင် လူ လို သိ ရ မည် ။ လူ ဖြစ် ပြီး လူ လို မ သိ ပါ က လူ့ အ ဖြစ် ကို ရ တာ နာ သည် ။ လူ ဖြစ် ရှူံး သည် ဟု ပြော ခါ အ မြဲ ဆုံး မ တတ် သည့် အ ပြင် ၊ မိုး ကုတ် ဆ ရာ တော် ဘု ရား ကြီး ၏ ဆုံး မ သြ ၀ါ ဒ စ ကား များ အား အ လွတ် ရွတ် ဆို လျှက် ၊ ကျ မ အား နေ့စဉ် ကျက် မှတ် သား ခိုင်း ပါ သည် ။
ကျ မ တို့မောင် နှ မ များ ၏ စာ ကြည့် စား ပွဲ ခုံ နှင့် ကပ် လျှက် အ ခန်း နံ ရံ ပေါ် တွင် မိုး ကုတ် ၊ ဆ ရာ တော် ဘု ရား ကြီး ၏ ဆုံး မ သြ ၀ါ ဒ က ထား အား ၊ အမေ က မှန် ဘောင် ဖြင့် သွင်း ထား ပြီး ၊ အ ကျ အ န ချိတ် ဆွဲ ၍ ကပ် ထား ပါ သည် ။
ကျ မ မှတ် မိ နေ သော စာ ပိုဒ် မှာ…။
“လူ ဟာ လူ လို သိ ဘို့ ရာ အ တွက်” ”လွယ် တယ် မ ထင် နှင့်” ။ ဟူ သော ရေး သား ထား သည့် ဆုံး မ စ ကား ၊ စာ သား အ ပိုဒ် ပင် ဖြစ် ပါ သည် ။
စာ ကျက် ပြီး လျှင် နေ့ စဉ် ရွတ် ဆို ခိုင်း တတ် ပါ သည် ။ နေ့ တိုင်း ပင် ဆို ပြ ရ ။ လက် ပိုက် လျှက် က အ လွတ် ပြော ခိုင်း တတ် သ ဖြင့် ၊ ကြာ လာ သော အ ခါ ၊ ကျ မ မှ မ ခံ စား နိုင် တော့ ပါ ဘဲ ငို ပါ သည် ။ မ ဆို မ ပြ ပဲ ပေ ကပ် နေ ပါ လျှင် ။ အ မေ က ထား ၀ယ် ကြိမ် လုံး အား ကိုင် ကာ ကျ မ တင် ပါး နှင့် ကပ် ပါ တော့ သည် ။ အ သား နာ လို့ ကျ မ ငို လျှင် ။ ကျ မ အ တွက် နှင့် အ ဖေ အ မေ တို့ မ ကြာ ခ ဏ စ ကား များ ကြ ရ ပါ သည် ။
ဂေါင်း မာ သော ကျ မ အား ၊ ဆယ့် တစ် နှစ် သ္မီး အ ရွယ် ရောက် လျှင် ။ အ မေ က နွေ ရာ သီ ကျောင်း ပိတ် ရက် တွင် သ င်္ကြန် ရေ အား မ က စား ခိုင်း တော့ ပဲ ။ အောင် သ ပြေ က မ္မ ဋ္ဌာန်း ကျောင်း ရှိ ၊ ယော ဂီ တ ရား ပတ် ၀င် ခိုင်း ပြီး ၊ ဆ ရာ တော် နား အ ကျိုး ကြောင်း လျှောက် ခါ အပ် ထား လိုက် ပါ တော့ သည် ။
အ မေ့ စေ တ နာ ကြောင့် ၊ ကျ မ တ ရား ထိုင် တတ် ခဲ့ ပါ သည် ။
ခ န္တီ စ သီး ခံ တတ် ခြင်း အ ရာ ကို လည်း ၊ ကျ မ မြင် တွေ့လာ ခဲ့ မိ ပါ သည် ။
ထို မှ အ စ ပြု ခဲ့ သည် ဟု ကျ မ ထင် မြင် လာ မိ ခဲ့ ပါ သည် ။
ကျ မ နား လည် ၍ ၊ ကြီး ပြင်း လာ သည့် အ ချိန် များ တွင် ၊ လူ ပု ဂ္ဂိုလ် နှင့် ပတ် သက် လျှင် ၊ မိ မိ လည်း လူ ၊ သူ လည်း လည်း လူ ၊ အ တူ တူ ပဲ ဟု မြင် လာ မိ ပါ သည် ။
ထို သို့ တ ရား ထိုင် ပြီး နောက် ပိုင်း တွင် လည်း ၊ ကျ မ စိတ် က များ စွာ ပြောင်း လည်း သွား ခဲ့ ပါ သည် ။
အ ဖေ အိမ် တွင် ခေါ် ထား သော အိမ် ဖော် အ ကူ များ ထဲ မှ မိန်း က လေး အ ချင်း ချင်း ဖြစ် သူ ၊ ကျ မ နှင့် မ တိမ်း မ ယိမ်း ရှိ သည့် မိ ၀င်း အား ၊ ကျ မ မှ လူ လူ ခြင်း အ တူ တူ ဘဲ ဟု မြင် လာ ပြီး ၊ ထ မင်း စား လျှင် အ တူ တူ စား ပါ သည် ။ အိပ် လည်း ကျ မ နှင့် ပင် အ တူ တူ လာ အိပ် ခိုင်း မိ ပါ သည် ။ ကျ မ ၀တ် ဆင် ရန် အ တွက် ၊ မိ ဘ များ မှ ချုပ် ထား ပေး သည့် အ ၀တ် အ စား အ သစ် များ ပါ ကိုယ် နှင့် ပင် ယှဉ် ခါ ထား ပြီး တန်း တူ ပေး ၀တ် ခဲ့ ပါ သည် ။ ဆင်း ရဲ ချမ်း သာ ၊ အ လုပ် သ မား ဟူ ၍ ဆို ပြီး ၊ ကျ မ မှာ ခွဲ ခြား မ မြင် ပါ ဘဲ “လူ ဟာ လူ လို သိ ဘို့ ရာ အ တွက်” တ ပြေး ညီ တည်း ထား ခါ ၊ ဆက် ဆံ တတ် လာ ခဲ့ ပါ သည် ။
အ ဖေ က တော့ ကျ မ ပြု မူ လုပ် ဆောင် နေ မှု များ အ တွက် ဘာ မျှ မ ပြော ခဲ့ ပါ ။ ကျ မ အား ကျန် သည့် မောင် နှ မ များ က ၊ အ မြင် တ မျိုး မြင် လာ ခဲ့ ကြ ပါ သည် ။
သူ တို့ က ကျ မ လို ဂေါင်း မ မာ ပေ မယ့် ၊ တ ရား မ ထိုင် ဘူး ပါ ။ အ မြင် မ တူ ကွာ ဟ မှု တွေ တော့ ရှိ လာ ခဲ့ ကြ ပါ သည် ။ ရှေး ပြု အ တိတ် ကံ ကြောင့် ဖြစ် သော ၊ အ ကျင့် စာ ဂ များ မှာ မ တူ လာ ကြ သ ဖြင့် သာ ၊ လက် ရှိ ပ စ္စု ပ္ပန် ဘ ၀ မှာ ကွဲ ပြား ခြား နား လာ ကြ သည် ဟု ၊ တ ရား သ ဘော အ တိုင်း သာ ။ ကျ မ မှ ထင် မြင် မိ ပါ သည် ။
ရှေး ပြု အ တိတ် ကံ အ ကြောင်း အ ရ ၊ ဆင်း ရဲ သည် ၊ ချမ်း သာ သည် ဟု ကွဲ ပြား ခြား နား လာ ခဲ့ ကြ ခြင်း အ ပေါ် ၊ မိ ၀င်း မှာ သူ ၏ ဆင်း ရဲ လှ သော ဘ ၀ ကို မ ကျေ မ နပ် ဖြစ် နေ ခဲ့ ပြီး ၊ ကျ မ က သူ နှင့် က အ တူ တူ ပင် တ ထပ် တည်း မ ဖြစ် နိုင် ။ သူ့ မှာ ကျ မ လို ကျောင်း ပ ညာ သူ မ သင် ရ ။ ကျ မ ၏ မိ ဘ များ က သူ့ အား ၊ ကျ မ လို ပင် တန်း တူ ထား နိုင် မှု ဆို သည် မှာ ဘယ် သော အ ခါ မှာ မှ မ ဖြစ် နိုင် ။ သူ့အား မွေး ဖွား လာ သည့် မိ ဘ များ အား ပြောင်း လည်း ပစ် ၍ လည်း ဘယ် သော အ ခါ မှာ မျှ မ ဖြစ် နိုင် ။ ၀မ်း နှင့် လွယ် ၍ မွေး ထား ရ သည့် ၊ မိ ဘ မေ တ္တာ တ ရား တို့မည် သည် မှာ လည်း ၊ ဘယ် သော အ ခါ မှာ မျှ ၊ အ စား ထိုး ၍ မ ရ နိုင် ဟု ။ ခံ စား ရ သည် တို့အား ၊ ကျ မ အား ရင် ဖွင့် ပြော ဆို ပြ ခါ ၊ သူ့ နေ ရပ် ထံ သို့ အ ပြီး ပြန် သွား ခဲ့ ပါ တော့ သည်။
အ ဖေ က သန်း ခေါင်း စာ ရင်း သွင်း ခါ ၊ ကျောင်း ထား ပေး မည် ။ မိ ဘ များ အား ပြန် တိုင် ပင် ရန် ပြော ဆို ပြ ခဲ့ သော ကြောင့် လည်း ဖြစ် ပါ မည် ။ ကျ မ မှ စိတ် မ ကောင်း ဖြစ် ခါ ၊ စိတ် ထိ ခိုက် ခံ စား ရ သော် လည်း မိ ၀င်း အ ပေါ် ခွင့် လွှတ် နိုင် ခဲ့ ပါ သည် ။ မိ ၀င်း က သူ ၏ မာ န အ မြင် ။ တ နည်း အား ဖြင့် ဆို ရ ပါ လျှင် ၊ ပ ပ ဉ္စ မျက် စိ ဖြင့် ကြည့် မြင် ပြီး ခံ စား သွား ခဲ့ သူ ဖြစ် ပါ သည် ။
အ မေ ကြောင့် သာ ၊ ကျ မ မှာ ။ “လူ ဟာ လူ လို သိ ဘို့ ရာ အ တွက်” ၊ မေ တ္တာ တ ရား စိတ် ထား တတ် လာ ပြီး ၊ မိ ၀င်း အ ပေါ် နှိုက် ချစ် ကြင် နာ နိုင် ခဲ့ ၊ ခွင့် လွတ် စ ရာ အ ဖြစ် တ နည်း ဆို ရ ပါ က ၊ ဗြ ဟ္မ စို ရ် မျက် စိ ဖြင့် ကြည့် မြင် နိုင် ခဲ့ ပါ သည် ။
မိုး ကုတ် ဆ ရာ တော် ဘု ရား ကြီး ၏ ဆုံး မ သြ ၀ါ ဒ က ထာ ဖြစ် သော ၊ ကျ မ ၏ စိတ် တွင် ထာ ၀ စဉ် ဖြစ် တည် ထွန်း နေ ခဲ့ သော “လူ ဟာ လူ လို သိ ဘို့ ရာ အ တွက်” “လွယ် တယ် မ ထင် နှင့်” ဟူ သော ဆုံး မ စ ကား စာ သား အ ပိုဒ် မှာ ၊ နား ထဲ တွင် အ စဉ် အ မြဲ မ ပြတ် ၊ ယ နေ့အ ထိ ပင် ၊ အ ထပ် ထပ် ကြား ယောင် နေ လျှက် ရှိ ပါ သည် ။ သ တိ ယ နေ လျှက် ရှိ နေ ပါ သည် ။
အ မေ မှ ၊ ကျ မ အား လော က ကြီး နှိုက် နေ ထိုင် သ မျှ ကာ လ တ လျောက် လုံး ၊“လူ ဟာ လူ လို သိ ဘို့ ရာ အ တွက် ” ဟု ဆို ပါ လျှင် ။ လူ လူ ချင်း ကိုယ် ချင်း စာ မေ တ္တာ တ ရား ၊ များ များ ထား ရှိ ကြ ရ မှာ ဖြစ် ပြီး ၊ ဗြ ဟ္မ စို ရ် မျက် စိ အ မြင် ဖြင့် ကြည့် တတ် ရန် ။ ရ ခဲ လှ သော လူ့ ဘ ၀ အား တန် ဘိုး ထား သိ မြင် ပြီး ။ လူ သူ တော် အ ကျင့် မြတ် ပု ဂ္ဂိုလ် တို့ ထံ ၊ ချည်း ကပ် နည်း နာ ခံ ယူ တတ် ရန် ။ သူ တော် မြတ် တို့ထုံး အား နှ လုံး မူ ကာ ၊ ကြိုး စား ကျင့် ကြံ နေ ထိုင် လုပ် ကိုင် ဆောင် ရွက် တတ် ရန် ။ လူ လူ ချင်း အ တူ တူ ။ ကွဲ ပြား ခွဲ ခြား သည့် ၊ ဒိ ဋ္ဌိ အ မြင် မျိုး ဖြစ် သည့် ပ ပ ဉ္စ မျက် စိ အ မြင် မျိုး ဖြင့် ကြည့် ခြင်း တို့ မှ ရှောင် ကွင်း ရန် ။ လူ လူ ချင်း တန် ဘိုး ထား သိ မြင် ကြ လျှက် ၊ တစ် ဦး အ ပေါ် တစ် ဦး အ ပြန် အ လှန် ၊ လေး စား ချစ် ခင် သည့် စိတ် ဓတ် ဖြင့် ။ ကိုယ့် လူ မျိုး ကိုယ့် ဘာ သာ သာ ၊ ကိုယ့် သာ သ နာ အား မ ညိုး နွမ်း စေ ဘဲ ၊ လော က ကြီး ကို ကျေး ဇူး သိ မြင် တတ် သည့် ၊ က တ ညု တ မျက် စိ ဖြင့် ကြည့် မြင် ၍ ၊ အ ကျင့် မြတ် ဖြင့် ၊ ကျေး ဇူး တင် တတ် ။ နေ ထိုင် တတ် ရန် ၊ ဟူ ၍ ဖြစ် ပါ သည် ။
“လူ ဟာ လူ လို သိ ဘို့ ရာ အ တွက်” “လွယ် တယ် မ ထင် နှင့်” ဟူ သော ။ မိုး ကုတ် ဆ ရာ တော် ဘု ရား ကြီး ၏ ဆုံး မ သြ ၀ါ ဒ က ထာ စ ကား မှာ ။ ရ ခဲ လှ သော လူ့ဘ ၀ သို့ ရောက် ရှိ လာ ကြ သည့် လူ သား အ ချင်း ချင်း အား လုံး တို့မှ ။ “လူ ဟာ လူ လို သိ ဘို့ရာ အ တွက်” အ မှန် တ ကယ် မှတ် သား နာ ယူ ကျင့် သုံး ထိုက် သည့် ။ လိုက် နာ စ ရာ ကောင်း လွန်း လှ သည့် တန် ဘိုး မ ဖြတ် နိုင် သည့် စ ကား သာ လျှင် ဖြစ် ပါ သည် ။
(ကျေး ဇူး ရှင် ကျွေး မေ မေ အား သ တိ ယ လျှက် ရေး သား မိ ခြင်း ဖြစ် ပါ သည်)
ကမ်ဘာကျော် ဘောလုံးသမား ခရစ်စတီယာနိုရော်နယ်ဒို ဖရီးကစ် ကန်တော့မယ်ဆိုရင် မကန်ခင်မှာ အသက်ကို တစ်ဝရှူသွင်းပြီး ပြန်ထုတ်တာမျိုး ၂ခါ ၃ခါလောက် အမြဲလုပ်တယ်
ကျွန်တော်လဲ စိတ်ရှုပ် စိတ်ဒေါသဖြစ်တဲ့အခါမျိုးဆိုရင် အသက်ကို ပြင်းပြင်းရှူထုတ်တာကို ၁၀ခါလောက်လုပ်တယ်
အန်တီအေးရေ … မှတ်သား ဆင်ခြင်လိုက်နာရမယ့် ပို့စ်ကောင်းလေးတပုဒ်ပါပဲ ။
လူဟာ လူလိုသိဖို့ အရေးကြီးမှန်း မသိတော့ဘူး …. အခုပို့စ်ဖတ်ပြီးမှ … လူလိုသိဖို့ ကြိုးစားရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဖြစ်မိပါတယ် ။ …
ဒါနဲ့ … ၀င်ဖတ်တုန်းက ပို့စ်ခေါင်းစဉ်က ကြည့်မြင်တတ်နိုင်ပါစေ ဆိုလို့ … အခုတော့ လူဟာ လူလို သိဘို့ရာအတွက် ဖြစ်သွားတော့ …. ပို့စ်မှားဝင်မိသလားဆိုပြီး .. ဇဝေဇ၀ါဖြစ်သွားတယ် … နောက်မှ … ပြန်တွေးကြည့်တော့ … ခေါင်းစဉ်ပြောင်းလိုက်တာပဲဖြစ်မယ်လို့ ထင်မိပါတယ် … ။
လေးစားထိုက်တဲ့ အမေ ပါပဲ အန်တီ အေးကေကေရေ. အခုပို.စ်လေးဖတ်ရတော့ တစ်ခုခုကို ရလိုက်သလိုပါပဲ….
အမေဆိုတာ သားသမီးတွေရဲ. ရှေ.ဆောင်လမ်းပြပါပဲဗျာ…… ပြောရင်းကျွန်တော် အမေကို သတိရလိုက်တာ… အမေချက်တဲ့ စားလို.မကောင်းတဲ့ဟင်း၊ အမေပြောတဲ့ ဆုံးမ စကားတွေနဲ. ဝေးကွာခဲ့တာ ၅နှစ်လောက်ရှိတော့မယ် ………….
အန်တီအေး …… ဒီနေ့ စိတ်ရှုပ်နေတုန်း အန်တီအေးရဲ့ပို့စ်လေးကို နှလုံးသွင်းဖတ်မိတယ် ……. အခိုင်ကလည်း စိတ်ကြမ်းလူကြမ်းတစ်ယောက်ပါ တရားထိုင်တာတို့ တရားစခန်းသွားတာတို့ကို မှတ်မှတ်ရရ တစ်ခါပဲ လုပ်ဖူးပါတယ် ……. ဒါပေမယ့် ဒေါသကို နှမြောခြင်း နောင်တရခြင်းနဲ့ ဖြေသိမ့်တတ်ခဲ့တယ် …. အခိုင် (၁၀) တန်းဖြေပြီး အဖိုးကို ဒေါသထွက်လို့ သံပေတံနဲ့ကော်စင်တစ်ခုကို ထုရိုက်ခဲ့ဖူးပါတယ် …. အဲဒီ ကော်စင်ကလေးကို အခုအခိုင်အိမ်ထောင်ကျတော့ အမေကအိမ်ကိုပေးလိုက်တယ် …….. အဲဒီစင်လေးကို မြင်တိုင်း ဒေါသထွက်ရင်စိတ်လိုက်မာန်ပါမလုပ်မိဖို့သတိပေးနေသလိုပါပဲ …. ဒါပေမယ့် မမအေးရယ် ပုထုစဉ်ဆိုတော့ကားလည်း သတိက၀င်တချက် ထွက်တချက်ဖြစ်နေတာပေ့ါ …….
ဒါကြောင့် စာသားလေးတစ်ခုကသိပ်မှန်တယ် “တရားစကားနေတိုင်းကြားက စိတ်ထားဖွေးလက် သိဥာဏ် တက်၏” အဲဒီစာသားလေးကသိပ်မှန်တယ် စိတ်ထဲညစ်နွမ်းနေရင် ဘုရားစာ တရားစာတွေဖတ်လိုက်ရင် အလိုလိုပြေပျောက်သွားတယ် ……..
တကယ့်ကို အကျိုးရှိ တဲ့ ပိုစ့်တစ်ခုပါပဲ
ဒါပေမယ့်အခုနောက်ပိုင်း ဘုရားဖူး တရားထိုင်တာတော့
သိပ်မလုပ်ဖြစ်သေးပါဘူး အားရင်ကျောင်းဝေယာဝစ္စ တွေတော့
လုပ်ဖြစ်ပါတယ် အတတ်နိုင်ဆုံးလဲ စိတ်ထားကောင်းအောင်နေပါတယ်
ဆိုင်လားတော့ မသိဘူး၊ ကျတော်လည်း နဲနဲမျှချင်ပါတယ်။ ကျတော့ ငယ်ငယ်က ကျတော့ အဘ က နှုတ်တိုက်သင်ပေးခဲ့တာလေးကိုပါ။ ခ န္တီစ၊ သီး ခံခြင်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ လကာင်္လေးပေါ့။
ကျတော်တော့ ဒေါသဖြစ်တိုင်း အဲဒီ လကာင်္လေးကို ဆိုမိတာပဲ။
စိတ်ဆတ်ပြီး အကြွေး မဆပ်တဲ့ ကျော့်အတွက် လူလိုသိဖို့အများကြီးကြိုးစားရဦးမယ်ဗျား..
လူလိုသိပါ စကားလုံးလေးတိုပေမဲ့ ကြိုးစာနေထိုင်ပြုမူရမှာတွေကတော့ ကျယ်ပြန့်တယ်နော်။
၀မ်းနဲ့ လွယ်မွေးနိုင်တဲ့သူဖြစ်နိုင်ရစေဘို့ ကြိမ်ဖန်များစွာဆုတောင်းပေးမိပါတယ်။
ကျွေးမေမေကလည်းနောင်တမလွန်မှာလူ့ ဘ၀အဖြစ်ပြန်ရလို့ မိန်းမသားဘ၀ပြန်ရခဲ့ရင်
သားသ္မီးမွေးနိုင်တဲ့အမေဖြစ်စေဘို့ ကျမတို့ မောင်နှမအားလုံးကိုဆုတောင်းခိုင်းခဲ့ပါတယ်။
ရင်ထဲမှာနာကျင်မှုပေါင်းများစွာတို့ ရဲ့ နှိပ်စက်ခြင်းကိုမသေမချင်းခံစားနေရတာကအန်တီပါဘဲ။။
ခိုင်ခိုင်ရဲ့ အတွေ့ အကြုံလေးကိုပြန်မျှတာကျေးဇူးပါကွယ်။
နှလုံးသွင်းခိုင်းတာက“လူဟာလူလိုသိဘို့ ရာ”“လွယ်တယ်မထင်နဲ့ တဲ့”လေ။
လူဖြစ်ပြီးလူ့ အသိမရှိရင်လူ့ အဖြစ်ကိုရတာနာတယ်တဲ့လေ။လူဖြစ်ရှူံးတယ်ပေါ့နော်။။
လူဟာ လူ လို သိ ဘို့ ရာ အ တွက် ” ဟု ဆို ပါ လျှင် ။ လူ လူ ချင်း ကိုယ် ချင်း စာ မေ တ္တာ တ ရား ၊ များ များ ထား ရှိ ကြ ရ မှာ ဖြစ် ပြီး ၊ ဗြ ဟ္မ စို ရ် မျက် စိ အ မြင် ဖြင့် ကြည့် တတ် ရန် ။ ရ ခဲ လှ သော လူ့ ဘ ၀ အား တန် ဘိုး ထား သိ မြင် ပြီး ။ လူ သူ တော် အ ကျင့် မြတ် ပု ဂ္ဂိုလ် တို့ ထံ ၊ ချည်း ကပ် နည်း နာ ခံ ယူ တတ် ရန် ။ သူ တော် မြတ် တို့ထုံး အား နှ လုံး မူ ကာ ၊ ကြိုး စား ကျင့် ကြံ နေ ထိုင် လုပ် ကိုင် ဆောင် ရွက် တတ် ရန် ။ လူ လူ ချင်း အ တူ တူ ။ ကွဲ ပြား ခွဲ ခြား သည့် ဒိ ဋ္ဌိ အ မြင် မျိုး ဖြစ် သည့် ပ ပ ဉ္စ မျက် စိ အ မြင် မျိုး ဖြင့် ကြည့် ခြင်း တို့ မှ ရှောင် ကွင်း ရန် ။ လူ လူ ချင်း တန် ဘိုး ထား သိ မြင် ကြ လျှက် ၊ တစ် ဦး အ ပေါ် တစ် ဦး အ ပြန် အ လှန် ၊ လေး စား ချစ် ခင် သည့် စိတ် ဓတ် ဖြင့် ။ ကိုယ့် လူ မျိုး ကိုယ့် ဘာ သာ သာ ၊ ကိုယ့် သာ သ နာ အား မ ညိုး နွမ်း စေ ဘဲ ၊ လော က ကြီး ကို ကျေး ဇူး သိ မြင် တတ် သည့် က တ ညု တ မျက် စိ ဖြင့် ကြည့် မြင် ၍ ၊ အ ကျင့် မြတ် ဖြင့် ၊ ကျေး ဇူး တင် တတ် နေ ထိုင် တတ် ရန် ၊ ဟူ ၍ ဖြစ် ပါ သည် ။
လူဟာ လူလို သိဖို့ရာအတွက် လွယ်မယ်မထင်နဲ့ ဆိုတဲ့စကား လေးက လွယ်မယောင်နဲ့ ခက် တိမ်မယောင်နဲ့ နက် အလွန်သိမ်မွေ့တဲ့ အနက်ဖွင့်ဆိုချက်လေးပါ။
တခါတရံမှာ ကျနော်က လူတစ်ကောင်ရောဟုတ်ရဲ့ လားလို. ပြန်စဉ်းစားဘူးတယ်
လက်မထောင်ခဲ.တယ် အန်တီအေးရေ ။
လူဖြစ်ရတာ လွယ်ဘူးဗျို့…။ အချစ်ရေး အိမ်ထောင်ရေး သားရေး သမီးရေး ကြီးပွားရေး စီးပွားရေး ဘာရေး ညာရေး ဟာယေရေး ဟာရေယေး အာရားမား ဒစ္စကို ဒန်းစား…စွံလို့ကြည် နေတာပဲ…။
အဲ့ဒါကြောင့် လူမဖြစ်ပဲ ကြောင်ဖြစ်သူတွေများနေတာ ..၀ုတ်တယ် ၀ုတ် … ခိခိ
မေတ္တာ တရား ထားနိုင်ရင်တော့ ဒေါသတွေ လျော့သွားတာ တော့ အမှန်ပဲ..
သီအိုရီ သိပြီး အဖြေ မထွက်တဲ့ ပုစ္ဆာတခုလိုပဲ.. မေတ္တာထားပြီး ဒေါသမထိန်းနိုင်သေးတာတော့ အမှန်ပါပဲ။
မိဝင်းက ကံကောင်းခဲ့တာလို့ ပြောလို့ ရမှာပေါ့ သူကို မျှဝေ ပေးတတ်တဲ့ သူနဲ့ နေခဲ့ ရတယ် ဆိုတော့လေ.. အတိတ်က ရေစက်တွေ ရှိခဲ့လို့ နဲ့ တူပါတယ်။
မှတ်သားစရာလေးမို့ ဒိုင်ယာယီနဲ့ 
စာကြည့်စားပွဲထိုင်တာနဲ့ မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ ..
နောက်တခုကအပြစ်လုပ်တဲ့နေ့ ဆိုလက်ပိုက်လျှက်နဲ့ အမေ့ကိုဆိုပြရတယ်။
ဂေဖက်သူကြီးကြောင့်အန်တီတို့ တွေ၊တွေ့ ဆုံခင်မင်သိကျွမ်းကြခဲ့ရတယ်နော်။။
ှSanity လို့ခေါ်တဲ့ ဆင်ခြင်တုံးတရားကတော့ လူတစ်ဦးစီမှာ မရှိမဖြစ်ပါပဲ။
ပညာ မရှိရင်လည်း လူလိုမသိသလို၊ သီလမရှိလည်း လူလိုမသိကြပါဘူး။
ကိုရင်လည်း insensate ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာ ခံစားချက်ထက်…
ဦးနှောက်ကို ဦးစားပေးခဲ့တာတွေရှိပါတယ်။။ အန်တီအေး ပို့စ်လေးကို သဘောကျပါတယ်ခင်ည။
ဧရာဝတီTun က အန်တီ့တူမလေးလားဟင်… အဟီးး..
ဘယ်ဘ၀က ပဌာန်းဆက်လဲမသိ …. အန်တီ့ကို အဒေါ်တော်ချင်နေတာ…
သြော်.. ရေစက်.. ရေစက်… :cool: :cool:
အန်တီပဒုမ္မာကျေးဇူးကြောင့် အန်တီအေးစာကို ပြန်ဖတ်ခွင့်ရပါတယ်။ အမှန်တကယ် အသိပညာပေးနိုင်တဲ့ ပို့စ်ဖြစ်လို့ အန်တီ ၂ယောက်လုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါကြောင်း။ လူ လူချင်းကိုယ်ချင်းစာတရားလက်ကိုင်ထားပြီး ဆက်ဆံရမဲ့ အသိကို အငြိမ်းစားဆရာမကြီးဖြစ်တဲ့ အဖွားရော အန်တီဆရာမအပျိုကြီးတွေရော မွေးသမိခင်ကိုယ်တိုင်ဆီကရော သင်ပြပြောပြလို့ သိခွင့်ရပါတယ်။ ကိုယ့်အပေါ် ကျောချင် နှိမ်ချင် မျက်လှည့်ပြပြီး လိမ်စားချင်သူများ ဆွေနီးမျိုးစပ်ထဲက ရှိခဲ့ ကြုံခဲ့ရတာတောင် သည်းခံနိုင်တဲ့ ကွယ်ရာကျမှ မချင့်မရဲ အပြစ်တင်တတ်တဲ့ အမေကြောင့် ဒေါသထွက်ရတာ အခါခါပေမဲ့ စိတ်ထိန်းနိုင်နေတုန်းပါဘဲ။ အန်တီအေးရဲ့ပို့စ်ကို ဖတ်မိပြီး ငါလုပ်တာမှန်ပါလားလို့ခံစားမိလို့ စိတ်ချမ်းသာရပါတယ်။